Wararka - Ka-hortagga Tallaalka Loop Infrared Sterilizer
Sawirada xakamaynta tayada
Shaybaarada Qolka Tirinta Unugyada
Sawirada mikroskoob ee xabagta
Slides ku dheggan Cytology
Islaydhyada ku dheggan Hydrophilic
Shaybaarada Microscope Polysine
Sawirro mikroskoob oo si togan loo dallacay
Sawirro-Mikroskoob oo midab leh
Boosaha Boostada Boostada Slide
Slides sanduuqa kaydinta iyo saxaarad
Slides caadiga ah
Sawirada Microscope Plain
Sawirro-Mikaraskoob-Baraf oo Kaliya
Muraayadaha Daboolka Microscope
Borosilicate 3.3 muraayadaha daboolka ah
Qurxinta lime soodhaha
Qurxinta daboolka sare ee sare
Qalabyada Saldhigga ah, Daboolka Birta Aan-Aabaha lahayn iyo Xumbo ka-qaadista
Silsilad iyo kiis aan dabool lahayn
2D Barcoded Vials Cryogenic
Dusha Dibadeed Vial Cryogenic
Dusha gudaha Vial Cryogenic
Shelefyada tuubada centrifuge iyo sanduuqa
Tallaalka Loop & Unugyada Faafiyeyaasha
Gaadiidka Qalalan ee suufka
Xoqo leh Dhexdhexaadiyaha Gaadiidka
Talooyinka Pipette Fit Universal
Gaadiidka Tube&TTube Tijaabo
Ka-hortagga Tallaalka Loop Infrared Sterilizer
1. wareegyada tallaalka waa in la isticmaalo marka la eegayo qaab-dhismeedka bakteeriyada ee muunadaha ama dhaqamada.Nidaamka giraanta talaalku waxa uu ka samaysan yahay silig caabbinta nikkel ah ama silig platinum gaar ah oo dhererkiisu yahay 5-8cm iyo adayg dhexdhexaad ah, kaas oo lagu dhejiyo bir ama dhalada.Kuwa aan lahayn giraanta waxaa loo yaqaan irbadaha tallaalka.
2. Usha birta ah ama usha dhalada ah qayb ka mid ah wareegga talaalka ee godka jeermis dilaha infrared waa in sidoo kale loo rogo si loo nadiifiyo.
3. Nadiifinta infrared-ka waxay sidoo kale nadiifin kartaa tuubada dhaqanka microbial ee walxaha galaaska.Waqtigaan, waa in fiiro gaar ah loo yeesho dareeraha ama walxaha kale ee ku jira tuubada, si looga fogaado shilalka khatarta ah sida kufidda ama qarxinta dareeraha gudaha.
4. Ka dib fiirsashada shaybaarka aan wasakhnayn iyo kuwa wasakhaysan, waa in isla markiiba la geliyo jeermiska dila si jeermiska looga saaro.
5. Ka dib markaad isticmaasho muraayadaha mikroskoobyada, hubi inaad si buuxda u tirtirto bakteeriyada wasakhaysan ee ku dul yaal boggaga mikroskoobyada ka hor inta aanad isticmaalin, haddii kale waxa laga yaabaa in baadhitaan khaldan la sameeyo marka mar labaad la isticmaalo.
Waqtiga boostada: Abriil-20-2022
12F dhismaha koonfurta, xarunta Julong, Feng Huang Hui, 266 South Jiefang wadada, Yancheng, Jiangsu, Shiinaha
Telefoon: +86 515 83080735
Fakis: 86 515 88387982